Muwaadin Somaliyeed oo Ku Xiran Kanada & Magdhow uu dalbaday – Radio Daljir
Oktoobar 3, 2017 7:59 b 0
Dhibane C/raxmaan Warsame oo 54 jir ah, kuna nool magaalladda Toronto waxa uu in ka badan 5 sanno ku xirnaa Xarumaha lagu hayo dadka Qaxootiga ee magaallooyinka Toronto iyo Lidsay ee Gobalka Ontario muddadii u dhexeysay bishii May ee sannadkii 2010-kii ilaa bishii December ee sannadkii 2015-kii.
Khamisitii la soo dhaafay ayuu C/raxmaan Warsame waxa uu Maxkamadda Federalka ee dalkaasi u gudbiyey Dacwad ka dhan ah Dowladda Federalka Kanada, wuxuuna dalbaday inay Dowladad Kanada isaga siiso lacag magdhow ah oo dhan 55 million oo Dollar dhibaatadii caafimaad-darro ee xagga dhimirka ee uu kala kulmay muddadii uu ku xirnaa Xarumaha dadka lagu hayo ee dalkaasi.
C/raxmaan Warsame oo dalka Kanada tegay sannadkii 1989-kii, waxaa loo diiday codsigiisa magangelyo-doonka ahaa, inkastoo loo oggolaaday inuu iska sii joogo dalkaasi sababo dhinaca Aadminimada iyo isagoo la xanuunsanaa cuddurka Macaanka.
Dhinaca kale, Maxkamadda magaalladda OTTAWA waxay horey u qorshaysay in Dhibanahaasi loo soo masaafuri Somalia, balse, Maxkamadda Federalka ee dalkaasi ayaa amartay inaan Dhibanaha lagu celinin Somalia.
Kooxda Daacish oo sheegatay Masuuliyadda Werarkii Las Vegas